ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: January 2008
ရန်ကုန်ဘူတာကြီး သန့်စင်ခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား.
ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ရန်ကုန်ဘူတာကြီး အထက်တန်း လက်မှတ် အရောင်း ဌာနအတွင်းရှိ အများသုံး သန့်စင်ခန်းနှင့် အုတ်တံတိုင်း ကြားတွင် ယနေ့ (၁၄း၀၅) နာရီ အချိန်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သန့်စင်ခန်းတွင် အခပေး ရေချိုးနေသူ ဒေါ်အေးမြင့် ၊ အသက် (၇၃)နှစ်၊ အနှိပ်သည် (ဘုန်းကြီးလမ်း ၊ စံပြရုပ်ရှင် အနောက်ဖက်တွင် နေထိုင်သူ )အား ၀ဲယာ လက်ဖျံနှစ်ဘက်နှင့် ၀ဲဘက် တင်ပါးတွင် ဗုံးစထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ သွားပြီး ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ် ဌာနသို့ ပို့ဆောင် သွားရကြောင်း အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားသည့် နေရာတွင် ဗုံးစ (၁၇)စအား သက်ဆိုင်ရာမှ သိမ်းဆည်းရမိပြီး လမ်းမဘက်ခြမ်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်မှ ဗုံးပစ်ထည့် သွားသည်ဟု ယူဆရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သာကီနွယ် မှ ရယူဖော်ပြပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်စုကြည့်၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ကျွန်တော် အမြင် (၂)
ယခု အခါတွင်မူ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်၏ ဖက်ဆစ်ဂျပန်နှင့် လက်တွဲကာ အင်္ဂလိပ်တို့အား ဆန့်ကျင်ပုံအား နှိုင်းယှဉ်ကာ ဆိုလာသည့် အတွက် (ပုထုစဉ်မှ တီးရှော့တွင် ရေးသားခဲ့ပြီး အခြား blogger အတော်များများ မှလည်း ထောက်ခံ ကိုးကားကြပါ၏) ယခု ဆောင်းပါးအား ရေးသားပြီး တလက် စတည်းမှာပင် ဒေါ်စုကြည်အား ဤရှုထောင့်မှ ဆက်လက် သုံးသပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်အား မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ဖိတ်ခေါ်လာခြင်းအား ပြည်သူများမှ အပြစ်မမြင် ကြခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ပါနည်း။ တာဝန်ယူရဲသော စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ဟု ကျွန်တော် ယူဆ ယုံကြည် ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် မိမိခေါ်လာသည့် ဖက်ဆစ်ဂျပန် တို့သည် မိမိနိုင်ငံတော်အား နစ်နာစေသည်။ မိမိလမ်းကြောင်းသည် မှားယွင်းခဲ့ပြီဟု သိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို မဆုတ်မနှေး ချက်ခြင်းပင် ဦးဆောင်ကာ ပြန်လည် ပြုလုပ်ခဲ့၏။ မည်သည့် အတွက်ကြောင့်မှ ဆုတ်ဆိုင်း နေခြင်းမပြုချေ။ ဤသည်ပင် သူ့အား အာဇာနည်နှင့် ထိုက်တန်စေသော စိတ်ဓါတ် ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ ထိုကဲ့သို့ မိမိအမှားကို တာဝန်ယူရဲသော၊ နိုင်ငံအား မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မှ မနစ်နာ စေသည့် အမှန်တကယ် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသော တာဝန်သိစိတ် ရှိသည့် အာဇာနည် တစ်ဦးသည် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဂုဏ်ယူဖွယ် တည်ရှိပါသည်။ ထိုအရာသည် ဆုကြေးများ၊ အထောက် အပံ့များနှင့် ရစ်တွယ်ကာ လမ်းကြောင်း ပျောက်နေသည့်၊ နိုင်ငံကို နစ်မွန်းစေသည့် နည်းလမ်းများကို သိလျှက်နှင့် နောက်ပြန် မဆုတ်နိုင်သည့် သမီးဖြစ်သူဒေါ်စုကြည်နှင့် လွန်စွာကွဲပြားစေသော အချက်ပင် ဖြစ်၏။
ဒေါ်စုကြည်အား လေ့လာကြည်ပါမည်။ သူမ၏ နိုင်ငံရေးသမားဘ၀ အစသည် ယောင်ဝါးဝါးနိုင် လှ၏။ အတွေ့အကြုံ အားနည်းသေးသည့် အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ သူမပါဝါအား သူမကိုယ်တိုင် မတိုင်းတာနိုင်သေးသည့်အတွက် လည်းကောင်း တခါတရံ ပျော့ပြောင်း တွေဝေစွာ၊ တခါတရံ တင်းမာ ခက်ထန်စွာဖြင့် သူမ စရိုက်သည် မငြိမ်ပဲ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ (အခြေနေကိုမူတည်ပြီး ပျော့သင့်သည့် နေရာတွင်ပျော့၊ မာရမည့်နေရာတွင်မာသည့် ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါ) နောက်ပိုင်းတွင် သူမ၏ အရှိန်ဝါသည် နိုင်ငံတကာ အလယ်တွင် များစွာ နေရာရှိ လာသောအခါ၊ ထိုအရာကို သူမကိုယ်တိုင် သတိပြုမိ လာသောအခါ သူမသည် မည်သူ့မျှ လူမထင်သည့် ပုံစံကို ထင်ရှားစွာပင် ပြလာတော့၏။ အန်အယ်ဒီ၏ ပါတီတွင်း အာဏာသိမ်းခြင်း ခံရခြင်းဟု ဆိုချင်ပါသည်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ဒီမိုကရေစီ မပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံရေးသမား များသည် လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုသာ ဦးတည်သည့် တပါတီစနစ် အောက်တွင် အသားကျနေသည့် ပြည်သူသည် လည်းကောင်း သူမအား ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ နည်းလမ်း စသည် တို့ထက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုသာ အသားပေးကာ ဒေါ်စုဆိုရပြီ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုသည့် အနေထားဖြင့် ကျေကျေနပ်နပ်ပင် သူမ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို လက်ခံကြပါ၏။ လွတ်လပ်စွာ သဘော ကွဲလွဲခွင့်နှင့် အသား မကျသော ထိုသူများသည် ဒေါ်စုကြည်၏ လုပ်ရပ်များ အပေါ် ဝေဖန်မှုများ ရှိလာသည့်အခါ ကြမ်းတမ်းစွာ တုန့်ပြန်ကြသည့် အတွက် သူမကို ဝေဖန် ဆန့်ကျင်မှု များသည် တစတစ ပျောက်ကွယ်ကာ သူမအား အကြွင်းမဲ့ အာဏာကို ပိုင်စိုးစေ၏။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်ကို အငမ်းမရ တောင်းဆိုနေကြ သော်လည်း ဒေါ်စုမပါသည့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းများ (အစိုးရလမ်းစဉ် ၇ ရပ်အားမဆိုလိုပါ)၊ မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင်များ မွေးထုတ်သည့် လမ်းကြောင်း များအား တင်ပြမှုများ ရှိလာသည်နှင့် ခါးခါးသီးသီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် တုန့်ပြန်ကြ ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဒေါ်စုကြည်သည် အနောက်မှ ကြေငြာလေ့ ရှိသလို ဒီမိုကရေစီ၏ ပုံရိပ်ဖြစ်လာ၏။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းနှင့် ချီသည့် ခန့်ခန့်ထည်ထည် အစဉ်လာရှိသော ဒီမိုကရေစီသည် ဒေါ်စုမပါပဲ ဖြစ်တည်၍ မရတော့ချေ။ မျက်နှာဖုံး စွပ်ခြင်း ခံရချေ၏။
ထိုသို့ အဆင့်တန်း တစ်ခုသည် မည်သို့မှ အိမ်မက်ပင် မမက်ခဲ့သော အနေထားသို့ ရောက်လာသော အခါ သူမအနေဖြင့် မည်သည့် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးသမားကိုမျှ မျက်စိထဲ တန်းတူ မမြင်တော့ချေ။ အဓိက တိုင်ပင် ဆွေးနွေးမှုများသည် အနောက် အုပ်စုများနှင့်သာ ဖြစ်လာခဲ့၏။ ထို့နောက်တွင်စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုသည် ပေါ်ပေါက်လာကာ သူမသည် ၀မ်းသာအားရပင် ထောက်ခံခဲ့ချေသည်။ မည်သည့် နိုင်ငံရေး သမားမျှလည်း ကန့်ကွက် ပါသည်ဟု ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် မဆိုဝံ့ကြပါချေ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အတိုက်ခံများသည် ထိုအချိန်မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံအား အဆိုးပင်မြင် ချင်ကြပါသည်။ ဘက်စုံ နိမ့်ကျလာသည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးများအား လက်ညှိုးထိုး စွပ်စွဲကြပါသည်။ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာနေသည့် အပြစ်များကို လက်ညှိုးထိုးခြင်းများ အပြင် အတွင်းစိတ်တွင်လည်း ထိုအရာများ မြင့်တက်လာမည်ကို စိုးရွံ့မှုများ ရှိလာကြ၏။ လက်ရှိအစိုးရ လက်ထပ်တွင် မည်သည့် အပိုင်းတွင်မျှ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မြန်မာ မျက်နှာရသွားမည်ကို မလိုလားချေ။ ပြည်သူတွေ ကျေနပ်လောက်အောင် ကောင်းသွားမည်ကို မလိုလားချေ။ ယုတ်စွအဆုံး မြန်မာ့ဘောလုံး ဆီမီးလောက်တက်ပြီ ဆိုလျှင်ပင် မျက်နှာပျက်ချင် လာကြ၏။ ပျက်နေပါပြီ၊ ဆင်းနေပါပြီ၊ ကျပ်နေပါပြီဟု စွပ်စွဲ အော်ဟစ် နေသော်ငြားလည်း အတွင်းစိတ်သည် ပိုပျက်စမ်း၊ ပိုဆင်းစမ်း၊ ပိုကျပ်စမ်း၊ မခံမရပ်နိုင် ပွင့်ထွက် ကုန်ကြစမ်းဟု ကြံရွယ် နေကြသည်မှာ မဖုံးနိုင် မဖိနိုင်ပင် ထင်ရှားလှ၏။
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု အောက်တွင် 10 နှစ်ကျော်မျှ လုံးပါးပါးကာ ဘက်စုံ ကျဆင်းမှုများအား စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွင်ကော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပါ ထိခိုက် ခံစားရပါ၏။ နိုင်ငံအား အထိခိုက်များ လှသော ထိရောက်မှုနည်းသည့် ဤနည်းလမ်းအား ပြန်လည် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန် ဒေါ်စုကြည်သည် မစဉ်းစားပါ။ မစဉ်းစား ရဲခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိုအခါ အချက် သုံးချက်ဖြင့် သုံးသပ်ကြည့် ပါမည်။
၁) ဒေါ်စုကြည်သည် စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုလမ်းကြောင်း၏ ထိခိုက်မှုကြီးမားပုံကို သုံးသပ် နိုင်စွမ်း ရှိလောက်အောင် အမြင်မရှိခြင်း။ တနည်းအားဖြင့် မမြင်ခြင်း။
၂) နိုင်ငံနှင့် လူထုအား မည်မျှ ထိခိုက်စေကာမူ အာဏာရရေး သာလျှင် အဓိက လမ်းကြောင်းအဖြစ် သတ်မှတ် ထားခြင်း၊ တနည်း။ နိုင်ငံနှင့် လူထုအား စတေးခြင်း၊
၃) မြင်သိသော်လည်း ထိုလမ်းကြောင်းအား ပယ်ဖျက်ရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း။ ပယ်ဖျက်မည် ဆိုပါလျှင် အနောက်နှင့် ဆန့်ကျင်မှုများ ရှိလာနိုင်သောကြောင့် ထိုလမ်းကြောင်းကို မရွေးချယ်ဝံ့ခြင်း။ တနည်း။ ပယ်ဖျက် ရမည့် လမ်းကြောင်းသည် အနောက်မှ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေး အတွက် ကူညီရန် ချထားပေးသော လမ်းကြောင်းအား ဖောက်ဖျက်ရာ ကျခြင်း။
ထိုအခါ ဒေါ်စုကြည်သည် မှားမှန်း သိသော်လည်း ပြင်ဆင်ရန် တွေဝေသော၊ အမှားကို ၀န်မခံရဲသော၊ ဆုကြေး အထောက်ပံ့များအား ပယ်ဖျက်ရန် သတ္တိမရှိသော သူတစ်ဦးဖြစ်လာ၏။ စိတ်ဓါတ်ခိုင်ကာ ရဲရဲတောက် စကားများအား မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ လူများအား အတွန့်ဆုတ်မရှိ ပြောဝံ့သော အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ၀ိုင်းဝန်း ဝေဖန်ကြသည့် အနောက် အုပ်စုများ၏ မတရားစစ်ပွဲများ၊ နိုင်ငံရေး ကိစ္စများတွင် ကမ္ဘာ့အရေးကို လစ်လျူရှု ထားခြင်းပဲလား မသိနိုင်လောက်အောင် အနောက် နိုင်ငံများအား (အာရှနိုင်ငံများ မပါပါ) ချီးကျူး ထောက်ခံခြင်းမှအပ ဝေဖန်စကား ပြောရန် လက်ရှောင် နေသည်ကို ထင်ရှားစွာ ပင်မြင်နိုင်၏။
ထိုသို့ သူမ၏ စိတ်ဓါတ်အား လေ့လာနေစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ နေ့သတ်မှတ်ချက်သည် ကျွန်တော့်အား ပိုမိုစိတ်ပျက်မိစေ ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားများက သူမ မွေးနေ့အား အမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ ကြသည်။ မည်မျှပင် နိုင်ငံ ဂုဏ်ဆောင်စေကာမူ တိုင်းတပါးသားနှင့် လက်ထပ်ထားသည့် သူမ၏ မွေးနေ့သည် မြန်မာ အမျုိးသမီးများနေ့ မဖြစ်ထိုက်ပါချေ။ ဒေါ်စုကြည်ကြောင့် တိုင်းတပါးသားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းအား မြန်မာ့အသိုင်းဝိုင်းမှ ဤမျှထိ လက်ခံ လာကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ထိုသို့သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် မျိုးဆက်သစ် မြန်မာ အမျိုးသမီးလေး များအား အထိန်းကွပ် မရှိအောင် တွန်းအားပေးရာ ရောက်စေ ပါသည်။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ ကျယ်ပြန့်သည့် အမြင်များ ရှိလာကြသည် မှန်သော်ငြားလည်း စိန်ကြည်တိုင်း လက်မထောင်နိုင် လောက်အောင်တော့ မဖြစ်သင့်ပါချေ။ ကျယ်ပြန့်သော အမြင် ခေတ်အမြင် စသည်တို့ကို အကြောင်းပြကာ ငြင်းချက် ထုတ်ခြင်းများကို ပြုကြမည်ဆိုလျှင် တောင်ပင် နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ဦး၏ မွေးနေ့သည် မြန်မာ အမျိုးသမီးများနေ့ မဖြစ်သင့် ပါချေ။ ထိုအရာအား နိုင်ငံရေးသမား များသည် သင့်သည် မသင့်သည် မစဉ်းစား အဆင်ခြင် မဲ့စွာပင် ဖားရလျှင် ပြီးရော သတ်မှတ်ခဲ့ကြ ချေ၏။
ထိုအခါ ဒေါ်စုကြည်၏ တုန့်ပြန်မှုကို ကျွန်တော်များစွာ စိတ်ဝင်စားမိ ခဲ့သည်။ သူမသည် သူမပြုခဲ့သည် ဆိုရုံမျှ နှင့်တော့ သင့်မသင့်ကို မဆုံးဖြတ်ပဲ လက်ခံ လိမ့်မည်ဟု လုံးဝပင် ထင်မထားမိခဲ့ပါချေ။ မည်သူ ပြုသည်ဖြစ်စေ မသင့်လျှော်ခြင်းသည် မသင့်လျော်ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ မှားသည်ဟု ထင်သည်ကို ငုံ့မခံ ပြန်ပြော တတ်သော၊ မည်သည့်အကြောင်းမျှ နောက်မတွန့်သောသူဟု အများက သတ်မှတ်သော သူမသည် ဆိတ်ဆိတ် နေခဲ့ပါ၏။ (ပြုံးပြုံးကြီး ကျေနပ်ခဲ့မည်ဟု ထင်ပါသည်) မည်သို့မျှ ပြင်ဆင်ရန် မကြိုးစားပါချေ။ ဒီလိုလုပ်လျှင် ဘာတွေ အကျိုးပြစ်ရှိနိုင်သည် မစဉ်းစား၊ မြှောက်လျှင် သင့်သည် မသင့်သည်တောင် မစဉ်းစားပဲ ကျေနပ် နေတတ်သည့် သာမာန် လူတစ်ယောက်ထက် ပိုမိုသည့် တုန့်ပြန်ချက်မရရှိခဲ့ပါချေ။
ထိုသို့ ထိုသို့ သုံးသပ်မိသော အခါဝယ် သူမအား နိုင်ငံတော် အတွက် အားကိုး သင့်သည့် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အသိပညာပိုင်း ဆိုင်ရာတို့တွင် ထူးခြားချက်အား မတွေ့ရှိ ပါတော့ချေ။ သင်တို့သည် သူ့နေရာမှာ ငါသာဆိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုသည့် လုပ်ဆောင်ချက် မျိုးကို သူမထံမှ တွေ့ဘူးပါသလား။ မည်သူမဆို သူမနေရာ ရောက်လျှင် သူမလောက်တော့ ပြုမူနိုင်မည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်။
သို့သော် သူမသည် ချက်နှင့်လက်နှင့် စကားပြောကောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်၏၊ ဖခင် အရှိန်ဖြင့် မြန်မာ ပြည်သူတို့အား လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်၏၊ ပညာတတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်၏။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ ရင့်ကျက်လာနေသူ တစ်ဦးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အမှန်တကယ် ကြိုဆိုသင့်သည့် ဝေဖန်မှုများအား ပြုပြင်ကာ ထိန်းသိမ်းရင်း ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးဖြစ်ရန် ကြိုးစားလျှင်မူ မြန်မာ နိုင်ငံရေး သမားများ ထဲတွင် အလားလာ အကောင်းဆုံးသူ တစ်ဦးအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည် နိုင်သည်ကိုမူ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ငြင်းချက်မရှိပါချေ။
သို့မဟုတ်ပါလျှင်မူ အဆိုပါအမျိုးသမီး၏ လက်တွင်းသို့ နိုင်ငံအား အပ်နှင်းရန် ကြံစည်မှုသည် ????.....
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်စုကြည်၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ကျွန်တော် အမြင်
ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံရေး အကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက် များအား တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားလေ့ရှိ၏။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ သမီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး အမျိုးသမီး တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေသည့် ဒေါ်စုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ ဝေဖန် ဆွေးနွေးရန် များစွာပင် ၀န်လေး မိပါသည်။ သို့သော် သူမသည် သာမာန် အမျိုးသမီ မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရန် ကြိုးပမ်းနေသူ တစ်ဦး ဖြစ်နေခြင်း၊ ပြည်သူ အများစုသည် သူမအား အမိနိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ပေးအပ်ရန် ဆန္ဒ ထက်သန် နေကျခြင်း တို့ကြောင့် သူမ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်များသည် လည်းကောင်း၊ အမူစရိုက် များသည် လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်၏ အရေးနှင့် များစွာ ဆက်စပ် ပက်သက် လာသည်ဟု ယူဆသဖြင့် မျက်နှာ မလွှဲပဲ အရေးပြု ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အတိုက်အခံ ပါတီ အန်အယ်ဒီတွင် ထိပ်ပိုင်း ဦးဆောင်သူ များစွာ ရှိပါလျှက် သူမ တစ်ဦးတည်း ကိုသာ ဦးတည် သုံးသပ် ရခြင်းမှာ အန်အယ်ဒီကြောင့် သူမရှိနေခြင်း မဟုတ်ပဲ သူမကြောင့်သာ အန်အယ်ဒီ ရပ်တည်နေခြင်း၊ သူမ၏ သြဇာအာဏာသည် အန်အယ်ဒီတွင် အကြွင်းမရှိ လွှမ်းမိုးနေခြင်း များကြောင့် အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ် များအား ဝေဖန်ခြင်း မပြုတော့ပဲ ချန်လှပ်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ သူမ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်များအား သုံးသပ်ရာတွင် သူမ၏ အားနည်းချက် ဖြစ်သော အိမ်ထောင်ရေးကို လက်ညှိုးထိုး နေမည်မဟုတ်ပဲ ထိုအိမ်ထောင်ရေးကို အခြေပြုကာ သူမစိတ်ဓါတ်အား ပထမဦးစွာ သုံးသပ်လိုပါ၏။ သူမသည် နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ ပါသည်။ ဗိုလ်မင်းရောင်သည် လည်းကောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် လည်းကောင်း အညံ့မခံလျှင် ခေါင်းဖြတ်မည်ဟု လည်းကောင်း၊ ဆုငွေထုတ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများကို လည်းကောင်း ကြံ့ကြံ့ခံ တွန်းလှန်ခဲ့ ပါသည်။ သူမကို မည်သူသည် အင်္ဂလိပ်နှင့် အိမ်ထောင် မပြုလျှင်မရဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါ သနည်း။ မရှိပါ။ အလိုတူ အလိုပါပင် မိမိဆန္ဒနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ပါနည်း။ ငယ်ရွယ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားတွင် ကြာမြင့်စွာ နေရခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စိတ်ခံစားမှု လျော့ပါး လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ (အနေဝေးလျှင် စိမ်းသည် ဆိုသည်မှာ လူ့သဘာဝပင်ဖြစ်၏)။ သို့သော် သူမသည် ထိုအိမ်ထောင်ရေးကို အပြစ်တစ်ခု ပြုလုပ်မိသကဲ့သို့ (ထိုအချိန်က လူတို့၏ အိမ်ထောင်ပြုမှုသည် ယခုကဲ့သို့ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လက်ခံမှု မရှိကြသေးချေ) သိရှိ ခံယူခဲ့ကြောင်းကို အိမ်ထောင်ကျ ပြီးနောက် လိပ်ပြာမလုံစွာ မြန်မာ အသိုင်းဝိုင်းနှင့် ပိုမိုစိမ်းကားစွာနေခဲ့ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မဖြစ်နိုင်မှ သာလျှင် အဆက်သွယ် လုပ်ခြင်းများသည် သိသာစွာပင် ဖြစ်လာပါ၏။ ထို့ကြောင့် သူမသည် မသိသောကြောင့် ပြုမူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ အပြစ်တစ်ခုဟု ခံယူလျှက်ပင် စိတ်ခံစားမှုကို မထိန်းနိုင်ပဲ နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏ဟု သုံးသပ်ပါသည်။
ယခုမူ သူမသည် လွန်စွာပင် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်လှသော ရဲရဲတောက် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး ဖြစ်နေပေပြီ... ဘ၀၏ နေရာ အသီးသီးတွင် ပျော့ညံ့စွာ အောက်ဆုံးထိ ဆွဲချထားခဲ့သည့် သူမ၏ မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်များသည် နိုင်ငံ၏ထိပ်ပိုင်းနေရာကို ရယူနိုင်သောအနေထားတစ်ခုဖြင့် အရှိန်ပြင်းပြင်း ပေါ်ပေါက်နေသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ပင်ဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဖက်မှလည်း နိုင်ငံသည် (၈၈)အခါမှ ၀ုန်းဒိုင်းဆိုကာ ကောက်ခါငင်ခါ ဆင်းရဲသွားခြင်းမဟုတ်ပဲ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းနေသည် ကာလ ရှည်ကြီးတွင် သူမသည် တစ်ချက်မျှ အရေးမလုပ် သတိ မရရှိခဲ့ခြင်း မှာလည်း သူမ၏နိုင်ငံ အပေါ် ထားရှိသော သံယောဇဉ်ကို များစွာပင် သံသယ၀င်မိပါသည်။
သာမာန် စိတ်ထား ပျော့ပြောင်းကာ ယိမ်းယိုင်လွယ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သော အဆိုပါ အမျုိးသမီးသည် အဘယ့်ကြောင့် လွန်စွာ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်သူ ဖြစ်လာပါ သနည်း။
၁) လက်ရှိအစိုးရသည် သူမ ဖခင်မျက်နှာကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ သူမနိုင်ငံ၏ ဖိအား (အင်္ဂလန်နိုင်ငံအား ဆိုလိုသည်) ကြောင့် သော်လည်းကောင်း သူမအား လွန်စွာဆိုးဝါးရက်စက်စွာ ပြုဝံ့မည် မဟုတ်ခြင်း၊ ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ခြင်း၊ ပြုနိုင်မည် မဟုတ်ခြင်း။
၂) နိုင်ငံတကာတွင် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတွင် လည်းကောင်း သူမ မမျှော်လင့်ထား ခဲ့သည့် အဆင့်တစ်ခုကို ရရှိလာခြင်း။
၃) ပြည်သူ၏ အားပေးမှု၊ ချစ်မြတ်နိုးမှုများသည် သူမ၏စိတ်ကို များစွာပင် ရိုက်ခတ်စေခြင်း။ တစ်နည်း ဆိုလျှင် မေတ္တာ ရောင်ပြန် ဟပ်ခြင်း။
စသည် တို့ကြောင့်ဟု ကောက်ချက်ချ ပါ၏။ ထိုသို့ ရှေ့ဆက်တိုးလျှင် အကျိုး ရှိမည်၊ မိမိအတွက် လုံးဝ အကျိုး မယုတ်နိုင် ဆိုသည်ကို သေချာ နေသောအခါ ဘယ်အတွက်ကြောင့်များ နောက်ပြန်ဆုတ်ရန် လိုပါမည်နည်း။ ထိုအရာသည် ခိုင်မာသော စိတ်ဓါတ်မဟုတ်ပဲ အပိုင်တွက်သော စိတ်ဓါတ်သာ ဖြစ်သည်ဟု ဦးစွာ သုံးသပ် လိုပါသည်။
ဦးစွာ ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်း အနည်းငယ် ပြောလိုပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဆွေးနွေးချက် များတွင် ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းကို တစ်ခါမျှ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဘလော့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ပုံများ၊ စာသားများထည့်သွင်းခြင်းအား ယခုဆောင်းပါး မရေးခင်ထိ လုံးဝ မပြုလုပ်ခဲ့ပါချေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယခု ခေတ်ကဲ့သို့ မြန်မာ နိုင်ငံရေးတွင် ဗိုလ်ချုပ် အမည်အား မိမိနေရာအတွက်၊ အာဏာအတွက်၊ ထောက်ခံမှု အတွက်၊ ပိုက်ဆံအတွက်၊ မဲဆွယ်ရေး အတွက် အစချီပြီး အတွက်ပေါင်း များစွာအတွက် သမီး ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကပင် မရှောင် လှိုင်လှိုင် အသုံးချခြင်း ပြုနေ ကြချိန်တွင် ထိုသူများနှင့် ရောရောင်ကာ ပါဝင်မိမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် အထူးပင် သတိပြု ရှောင်ရှားခဲ့ ပါသည်။ ကျွန်တော် လေ့လာ မိသည်မှာ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး လုပ်သူများသည် ပြည်သူ၏ ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် ထားရှိသော သံယောဇဉ်နှင့် မြတ်နိုး လေးစားမှုအား အသုံးချကာ မိမိလမ်းကြောင်းသည် မည်မျှပင် သွေဖယ် စေကာမူ ဗိုလ်ချုပ် ပြောသည့် စကားများနှင့် အတင်းပင် စပ်ဟပ်ဖြတ် တောက်ယူကာ အသုံးချမှု ပြုကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ လှုပ်ရှားမှုကို ကိုက်ညီစေမည့် မိန့်ခွန်းများကိုသာ ဖြတ်တောက်ယူကာ ကျန်အပိုင်း များအား ချောင်ထိုးမှုကိုလည်း မျက်နှာ ပြောင်ပြောင် ပြုဝံ့ကြသည်မှာ အထင်အရှားပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အာဇာနည်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အသုံးချခံ ဖြစ်နေသည်မှာ ရာဇ၀င်ရိုင်းမှုပင် ဖြစ်ချေ၏။